Hargeysa: Wariye Liban Mawel Oo 12-Saacadood Ku Xidhnaa CID-da | Somaliland.Org
December 31, 2008	Hargeysa (Somaliland.Org) – Ciidanka Ilaalada xarunta Guddiga Doorashooyinka Somaliland ayaa shalay xabsiga u taxaabay Wariye Liibaan Maaweel Shire.
Weriye Liibaan Maaweel Shire
Wariyahan oo xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa ku xidhnaa saacado badan oo shalay ahayd, waxa xadhigiisa amray sida uu sheegay Taliyaha ciidanka Ilaalada guddiga doorashooyinka. “Waxaan ku xidhnaa 10:00 Subaxnimo ilaa 6:10 Maqrinimo xarunta dambi baadhista ee CID-da waxaana i soo xidhay taliyaha ciidanka ilaalada xarunta komishanka doorashooyinka Yuusuf Iidaan” Sidaas ayuu yidhi Liibaan Maaweel.
Waxana uu intaa ku daray oo uu sheegay in wakhtiga la xidhay uu ku jiray hawshiisii saxaafadeed ee subaxnimo. “Waxaan isku dayay inaan sawirro ka qaado Xayndaabka guud ee Xarunta Doorashooyinka iyo Kaabado waaweyn oo lagu sameeyay, wakhti aan hawshaas saxaafadeed ku guda jiro ayaan ku war helay weerar iyo aflagaado uu ii jeedinayo oo igaga imanaya nin markii danbe la ii sheegay inuu yahay madaxa ilaalada xaruntaasi. Waxa la yaab igu noqotay, meesha waxa ka dhawaa laba Askari oo ka mid ah Ilaalada Xarunta, kuwaasoo la socday sawirada aan qaadayo, askartaasi xataa imay odhan maxay tahay shaqada aad wadaa iyo in sawir la qaado lama ogola midna, sidoo kale ninkan taliyaha ahi intaanu i odhan jooji sawirka aad qaadayso iyo lama oggola midna ayuu ii soo qaddimay oo uu igu bilaabay cay iyo aflagaaddo aanan ka filayn inay ka soo yeedho hawl-wadeen dirays ciidan qaran huwan oo waliba sarkaal ah” Sidaas ayuu yidhi wariye Liibaan. Markaa, ka dib waxa uu sheegay inuu ku war-geliyay sarkaalkan inay shaqadiisa saxaafadeed ka mid tahay sawir qaadistu, islamarkaana aanu xaq ugu lahayn inuu Afla-gaadeeyo, isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi Wariye Liibaan Maaweel. “Hase ahaatee, sarkaalku wuu sii waday, ana markaa, waan ka jawaabay. Waxana uu taliyahani amray laba Askari oo uu ku wargeliyay inay i geeyaan xarunta CID-da oo la i xidho, sidaa ayaana la igu xidhay.”
Xarunta baadhista danbiyada waxa uu sheegay wariyahani in lagu weydiiyay wixii dhacay, sidoo kalena war-bixin laga qoray Askartii geysay halkaas, markaa ka dibna la taxaabay. “Si xun iilamay dhaqmin CID-du, cad-ceed dhicii shalay-na waa la isoo daayay hase ahaatee, waxaan garan waayay waxa aan saacadahaa badan ku xidhnaa ee aan galabsaday. “Ayuu yidhi Wariye Liibaan.
Liibaan Maaweel Shire waxa uu ka mid-yahay wariyayaasha muddada ku soo jiray hawsha saxaafadeed. Muddadaasi oo uu ka soo shaqeeyay hay’ado kala duwan, sida wargeyska Haatuf, Idaacada madaxa banaan ee Horyaal, Horn Cable TV iyo warsidaha barta intarnetka ee Somaliland.org oo uu wakhtigan ka yahay Tafaftiraha guud. Waana markii saddexaad ee sife aan waafaqsanayn xeerarka iyo shuruucda damaanad-qaaday madax-banaanida xoriyada saxaafadda xabsiga loo dhigo isaga oo uu ku guda jira waajibaadkiisa shaqo. Tan kali kuma aha Liibaan, hase ahaatee, waxa la wadaaga wariyayaal door ah oo sidoo kale marar kala duwan iyadoo aan maxkamad loo marin xadhigooda xabsiga loo taxaabay dalka Somaliland. In kasta oo hayadaha xuquuqda aadamiga, ururarada saxaafada heer caalami iyo heer dalba ay talaabooyinka noocan ah dhaleeceeyeena illaa hadda ma jiro masuul ama sarkaal arrintaa darteed maxkamad ku mutay si aan loogu deg-degin xadhiga muwaadiniinta guud ahaan iyo gaar ahaan hawl-wadeenada saxaafada.